6061 Aluminum 3in X 5in Rosin takelaka Ataovy amin'ny heaters Controller Heavy Adidy Rosin Press Kit maso roa sosona cartridge heaters - China Dongguan Amona, Hardware
L0 Vape penina
6061 Aluminum 3in X 5in Rosin takelaka Ataovy amin'ny heaters Controller Heavy Adidy Rosin Press Kit maso roa sosona cartridge heaters
Ny olana lehibe indrindra amin'ny rosin maika dia ny vola lany amin'ny fitaovana. Raha tsy vonona ny manenjika avy resin kely dia be mampiasa singam-bolo iray straightener, ny handeha tsy maintsy mandany bucks vitsivitsy. Efa hitako be dia be ny lehibe milina mandeha ho an'arivony dolara, fa nandany fa betsaka wouldn`t dikany raha tsy ny mihazakazaka ny raharaham-barotra.
Raha ny liana amin'ny famokarana sasany rosin tsara amin'ny vokatra be ny handeha mila zavatra roa:
Rehefa fanindriana rosin, tsy hafanana ilaina amin'ny ambony fanerena, izay midika azonao atao saika mangatsiaka gazety rosin, raha manan-jo fitaovana. Kanefa, mamela tsora-kazo ny teny eto. I`m momba ny hampiseho aminao ny fomba azonao atao ho anao manokana DIY Rosin Press ho an'ny latsaky ny $ 500.
Thats ankavanana, ny mpanao gazety izay afaka lovia avy 12,000lb ny fanerena amin'ny hafanana ho an'ny fanaraha-maso ny vokatra indrindra! Tsara indrindra rehetra, izany ihany no maka roa minitra mba hanorina sy hampiasa.
Let`s miatrika izany, maika Rosin no fomba tsara indrindra mba manenjika avy ny juices rehetra avy amin'ny rongony. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny hafanana sy ny fanerena mba hanesorana resin avy amin'ny zava-maniry (fototra izany), na iza na iza dia afaka manaiky ny sasany kalitao avo resin.
Ny olana lehibe indrindra amin'ny rosin maika dia ny vola lany amin'ny fitaovana. Raha tsy vonona ny manenjika kely dia be avy resin mampiasa singam-bolo iray straightener , ny handeha tsy maintsy mandany bucks vitsivitsy. Efa hitako be dia be ny lehibe milina mandeha ho an'arivony dolara, fa nandany fa betsaka wouldn`t dikany raha tsy ny mihazakazaka ny raharaham-barotra.
High tsindry - farafahakeliny 500lb ny 1,000lb (2+ taonina tian'ny)
Hafanana - 150 ° F ny 350 ° F (° F tiany 200)
Rehefa fanindriana rosin, tsy hafanana ilaina amin'ny ambony fanerena, izay midika azonao atao saika mangatsiaka gazety rosin, raha manan-jo fitaovana. Kanefa, mamela tsora-kazo ny teny eto. I`m momba ny hampiseho aminao how you can make your own DIY Rosin Press for less than $500.
Mba hanaovana io Rig hany ilainao dia vokatra tsotra roa:
Double Rosin Press Takelaka Kit Heavy Adidy Dual Controller Box amin'ny Wired Heating Rod
6-Ton hydraulic Shop Floor Press amin'ny Press Tsanganana sy H Frame
Raha tsy tanteraka ny Taitra anefa mamela hankany an-dafin'ny ho an'ny antsipirihany. Koa ny tsara indrindra ho fomba mialoha maika rosin mofomamy ho ambony terpenoid vokatra.
Nisy enina taonina mahery gazety mitoetra ao mafy H-filanjana azy. Faran'izay matanjaka sy fanorenana tsotra thats mora ny hametraka. Ny lafiny manan-davaka lalamby izay mamela anao hanitsy ny fiàsan'ny toerana. Izany dia ahitana ihany koa ny asa fanaovan-gazety takelaka 2, hampiasa azy ireo! Izy ireo no hiaro ny fanafanana takelaka. Miaraka tanteraka lanjan'ny 60lb, dia afaka soa aman-tsara crank avy 6 taonina ny fanerena, fomba mihoatra noho ny dia mila.
Heat voafehy Press Takela
0 ° F ny 415 ° F in minitra !, ireo adidy mavesatra takelaka afaka hiteraka hafanana bebe kokoa fa ny ampy sy manohitra hatramin'ny 8000psi. Tsara indrindra rehetra, dia tezitra ny takelaka ho amin'ny ankavanana, mari-pana amin'ny fanaraha-maso elektronika boaty! Ianao don`t maintsy jerk manodidina amin'ny takelaka mangotraka, na mampiasa namely fanilo toy ny milina fanontam-pirinty hafa.
Raha toa ianao ka mbola nanery rosin teo aloha, dia tokony hanana ny tsara tarehy hevitra tsara ny zavatra tokony hatao sy ny fomba mora izany no ampiasaina. Ny fananganana ny asa fanaovan-gazety dia hamonjy anao vola iray taonina sy miasa ary koa raha tsy tsara noho ny milina fanontam-pirinty hafa izay avo roa heny ny vidiny.
1.Plug ary milalao 5 "x3" platen natsangana. Mampiasa 6061 aluminium satria dia mazava, mahery, ary manana hafanana tsara famindrana, ka mahatonga tsy misy toerana mafana!
2.Dual mafana amin 'ny takelaka, na mizara hafanana zone.This iray dia voazaha toetra, nizaha toetra, ka voaporofo famolavolana amin'ny vokatra tsara dia tsara ny tranga an-jatony. Efa nizaha toetra roa izahay betsaka, tsy misy tsara kokoa ny kalitaon'ny vokatra na ny maso roa sosona.
3.Fully marina hafanana fanaraha-maso avy any 0-300F aina. Ny hafanana sensor drills mivantana any amin 'ny takelaka, manome anareo ny tena marina platen mari-pana.
5.Made mba hifanaraka misy hydraulic gazety hatramin'ny 20 taonina tamin'ny 2 "savaivony ondrilahy na latsaka.
Fitomboan'ny ny takelaka ny asa fanaovan-gazety ny safidy dia toy ny tsotra toy ny hanenjanany roa napetraka screws (hex fanalahidy Anisan'ny) tao amin'ny ondrilahy. Setup maka latsaky ny 5 minitra!
6.Reach naniry ny mari-pana ao amin'ny latsaky ny 10 minitra amin 'ny mahery cartridge 500w fanafanana singa.
Takelaka 7.The dia afaka mandoa ho an'ny tenany ao anatin'ny ora vitsivitsy voalohany ny fampiasana!
Fitaovana io dia ahitana:
Hafanàm-po an-maso nampifandraisina mivantana ny roa 500w cartridge fanafanana singa
Hex key an-tendrombohitra ny takelaka ny asa fanaovan-gazety ny safidy
Taona iray Full Warranty amin'ny elektronika
Address: Warehouse, Los Angeles Warehouse, + 3731B San Gabriel River Park lalana, Pico Rivera, CA 90660, USA
6061 Aluminum 3in X 5in Rosin takelaka Set ...